178 Kulwandle lwaseWaitarere - I-Airbnb
178 Kulwandle lwaseWaitarere
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguIan
Ibekwe kwenye yeWaitarere Beaches eyona ndawo iphakamileyo ngaphezulu kokujonga indawo enkulu yelali enemibono yolwandle, ilanga lemini yonke kunye necandelo elikhulu. Ulwandle luhamba ngemizuzu emi-5 kwaye lukwazi ukufikelela ngokuthe ngqo ehlathini ngesango.
Yonwabile nge-WIFI, iSky TV, (kubandakanywa nezemidlalo), iDVD, iTV yesibini kwigumbi eliphezulu lokulala ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, ilinen ibonelelwe, i-BBQ kwindawo yokugcina indawo yokufikelela ngokuthe ngqo ekhitshini ene-awning esongwayo.
IWaitarere Beach, yindawo entle yokuya xa ufuna ukubaleka kuyo yonke. Kumgama olula wokuhamba ukusuka eWellington, kwaye ukusuka kufutshane nePalmerston North, iWaitarere Beach yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka kwaye yimizuzu eli-10 kuphela yokuqhuba usuka eLevin.
I-BBQ izakucocwa ziindwendwe nceda
I-Bach inobonelelo olungenamda lwamanzi abhorekileyo. Kunokubakho umbala omncinci ngenxa yomxholo we-Iron emanzini, amanzi okusela amatsha aya kubonelelwa kuwe. Sisebenzisa amanzi abhokile kuyo yonke enye into, ukupheka, ukuhlamba kunye nokucoca amazinyo njl.
Okongeziweyo: Ukucoca (Kuyafuneka, i-NZ $ 45.00 ngokuhlala) QAPHELA: Ngaphantsi kwesithethe saseKiwi Bach kulindeleke ukuba ushiye indlu ucocekile kwaye uhlambe izitya ngaphambi kokuba uhambe.
Ilinen ecocekileyo (iitawuli/iishiti/iitawuli zeti) zinokubonelelwa ukuba zifunwa ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo.
Ulwandle lubanzi kwaye lunesanti kunye nedrive ekufikeleleni ivumela indawo eninzi kuyo yonke imisebenzi oyithandayo yaselwandle. Ulwandle luhla kancinci lungene kumanzi anzulu ukuze kubekho indawo eninzi ekhuselekileyo yokubheqa kulutsha, kwaye ngeenyanga zasehlotyeni iklabhu yokusefa iseka i-patroli. I-Waitarere Beach ikwayindawo yokuloba edumileyo apho i-Kahawai, i-Snapper, i-Groper, i-Gurnard, i-Flounder kunye ne-Sole zezona zixhaphakileyo zibanjiswa.
Kukwakho nentaphane yeepaki kunye noovimba ukugcina abantwana bexakekile
Nceda uqaphele ukuba okwangoku akukho matshini wokuhlamba kodwa unebhafu enkulu yokwenza nakuphi na ukuhlamba izandla ngokukhawuleza kunye nomgca wempahla ukuba uyafuneka.
Igumbi lokulala eliphezulu lineembono ezintle kodwa liyafikelela kwizinyuko eziphakamileyo njengoko kubonisiwe kwiifoto.
Akuvumelekanga ukutshaya ngaphakathi endlwini . Akukho zinja. Kufuneka uhambe nenkunkuma yakho kangangeentsuku ezi-2 okanye ezi-3, amalungiselelo anokwenziwa ukususwa kwenkunkuma ukuze kuhlale ixesha elide. Akukho maqela.
Umbuki zindwendwe ngu- Ian